Vavaky ny fanantenana | FIVAVAHANA VAVAKA
Home vavaka Vavaky ny fanantenana
Vavaky ny fanantenana
Rômanina 5: 5 Ary ny fanantenana tsy mahamenatra; satria ny Fanahy Masina, ny Fanahy Masina, izay omena antsika.
Ho fanamafisana, ary handikana ny fahalalana mitovy, tsara kokoa ny hanombohana ity lahatsoratra ity amin'ny diksionera misy dikany sy ny hevitry ny fanantenana ankapobeny.
Araka ny Webster Rakibolana anglisy, Fanantenana dia voafaritra ho fahatsapana fiandrasana sy faniriana zavatra hitranga manokana. Amin'ny ankapobeny, ny fanantenana dia ny mitazona saina tsara indrindra na dia manohitra ny zava-dratsy indrindra aza ny zava-dratsy rehetra. Ny fanantenana dia hery manosika ny olona handeha rehefa tsy tsara ny zava-drehetra.
Rehefa mandeha ny fotoana dia diso ny fanantenan'ny olona ny finoana sy ny mifamadika amin'izany. Raha ny hevitr'io lahatsoratra io dia hanazava ny fanantenana sy ny finoana isika, ny fitoviana sy ny tsy fitovian'izy ireo.
Tsara homarihina fa ny roa (Fanantenana sy ny finoana) dia tsy azo sarahina amin'ny fitomboana ara-panahy amin'ny olon-drehetra. Ny Hebreo 11:11 dia mamaritra ny Finoana ho porofon'ny zavatra antenaina, ny fananan'ny zavatra tsy hita. Noho izany dia zava-dehibe ny lehilahy iray dia tokony haneho ireo toetra roa ireo.
Raha ny finoana dia fahatokisana na fahatokisana olona iray na zavatra na finoana tsy miorina amin'ny porofo ary ny fanantenana dia fiheveran-tena feno fanantenana mifototra amin'ny antenaina na faniriana. Hitantsika fa mandeha mitety vava daholo ny duo isaky ny dia ao amin'ny fiainana.
Ny tsy fitoviana kely eo amin'izy ireo dia ny finoana no miresaka an'io fotoana io raha miresaka ny ho avy i Hope.
Nahoana no zava-dehibe ny mivavaka foana ho an'ny fanantenana?
Mitranga ny finoana rehefa misy olona mino zavatra mihoatra ny mahazatra dia mety hitranga na dia amin'ny fotoana fohy indrindra aza rehefa tsy misy ny fanantenana. Aza hadino fa mitaky fahatokisana zavatra amin'ny fotoana iray ny finoana. Ny fanantenana amin'ny lafiny iray dia fahatsapana fahatokisana fa mbola ho avy ny tsara indrindra. Io faharesen-dahatra ao am-po io na dia tsy misy faminaniana aza na mahita fahitana, izany toky izany fa ho tsara amin'ny farany ny rehetra. Tokony hivavaka ny vavaka fanantenana isika satria ny fanantenana dia manohana ny finoantsika.
Imbetsaka ny fanantenana no hery manosika olona iray. Ao anatin'ny tontolo iray feno fanaintainana sy fomba amam-panao isan-karazany ataon'ny fahavalo mba hanana asa ananan'ny tsirairay, ny fanantenana ny ampitso tsara kokoa dia ny fahasoavana mamonjy azon'ny olona iray ianteherana. Na dia nandalo fahadisoam-panantenana aza ny lehilahy iray dia ny fanantenana ihany no hany zavatra azon'ny olona iray atao.
Ny Vavaka ho amin'ny fanantenana
Romana 15:13 Andriamanitry ny fanantenana anie hameno anao fifaliana sy fiadanam-po amin'ny finoana, mba hitomboan'ny fanantenana amin'ny haben'ny Fanahy Masina.
Ry Tompo Andriamanitra ô, mifaly izahay, amin'ny herin'ny famonjenao nohazoninay, aza avelanay hampijaliana. Rehefa misafoaka aminay ny tadio fiainana, rehefa toa miakatra be ny làlambe eny an-dàlana rehefa tanteraka ny fampanantenanao rehetra nataonao, dia na dia te-hitsiky aza isika hoe mody ho tsara daholo ny zava-drehetra fa ny zava-drehetra azontsika atao dia mitoloko lalina . Tompo ô, omeo anay ny hery tsy hanary toky anao.
Ianao sy ianao irery no miankina amin'ny fanantenanay, miorina amin'ny teninao, miantehitra amin'ny ra izay nalatsaka ihany isika, tsy mamela antsika ho menatra.
Na dia amin'ny fotoan'ny aretina, rehefa toa tsy manohitra antsika ny fizaran'ny dokotera rehetra rehefa tsy tanteraka ny faminaniana rehetra momba ny fahasalamana tsara kokoa. Rehefa manapaka ny fiombohana ho fanasitranana aza isika, rehefa mahita ny hazo fijaliana miakatra amin'ny ra toa ny mpamonjy dia maty fotsiny noho ny antsika kanefa mbola lavitra antsika ny fanasitranana. Ry Tompo ô, mangataka aminao izahay hanome anao ny Fahasoavana mba hanantena anao mandrakariva, fa mbola azonao atao ny mamerina amin'ny laoninay ny fahasalamanay.
Ary na dia toa nifarana aza ny rehetra ary tsy ho tonga ny fanasitranana, nefa na dia mahita ny tenantsika aza isika mizotra amin'io lalana io dia mandeha ihany ny maty, miangavy anao izahay, omeo anay ny fahasoavana mba hanantena ny famonjenao mandrakariva.
Raha mangidy izao tontolo izao ary misy fitsaharana any an-danitra, dia nanjary menatra ny fanantenana ny mpino. Izahay dia ilay Rainay any an-danitra, noho ny nanomeany an'i Kristy Jesosy izay nitondra Fahasoavana ho antsika rehefa tsy mendrika izany isika, misaotra ny nandatsaka ny rany izay nitondra fanantenana amin'ny tontolo tsara kokoa.
Tahaka ny lazain'ny soratra masina ao amin'ny Deoteronomia 31: 6 Mahereza sy matanjaha. Aza matahotra na matahotra azy ianao; fa Jehovah Andriamanitrao no miara-mandeha aminao. Tsy handao anao na hahafoy anao Izy. Ahoana no hinoantsika an'izany rehetra izany rehefa very ny fanantenana famonjena antsika amin'i Kristy Jesosy zanakao.
Omeo anay ny fahasoavana ho matanjaka mandritra ny olana, omeo hery izahay tohizana. Tamin'izany fotoana izany, raha tahaka ny fampanantenan'ny fiainana mandrakizay dia nidina tamina vatolampy, ka toa tsy ho very daholo izay rehetra tokony iantsoana anao ho anao, dia ny olona novonjen'ny ra sarobidin'i Kristy Jesosy zanakao. Omeo anay ny fahasoavana mba mbola hanantena ny famindram-ponao. Ny lehilahy iray dia ho very ny fahatsapanao rehetra amin'ny andro hahafatesan'ny fanantenanao anao, ampio izahay hitazona ny fanantenanay ao aminao fa na dia maty eto an-tany aza isika, dia mahazo antoka tsara ho toerana tsara kokoa eto amin'izao tontolo izao.
Ny zavatra ny hazo fijaliana dia fahadalana amin'ireo ho very, eny Tompo ô! Tsy mbola nahita anao izahay, fa manana ny fahatsapana fa misy ianao ary mino be dia be ny hery namorona ny lanitra sy ny tany. Omeo hery izahay mba tsy hanary ny fitokisanay aminao intsony. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
Previous lahatsoratraDingana dimy raha te hambara amin'ny valim-bavaka
Next lahatsoratraAhoana ny fampitomboana ny fiainanao amin'ny vavaka 2020
Vavaka ho an'ny Firenena ao Ghana
20 Ireo vavaka tokony hivavaka mba hamelomana ny fanambadiana maty